Zuva Nezuva: Kudzokorodza Dhijitari Nhau | Martech Zone
China, Kukadzi 3, 2011 China, June 18, 2015 Douglas Karr
Nechinangwa cheichi blog positi, ini ndakabuda ndokutora ipad nyowani. Ndinoziva, ndinoziva… chikonzero chakareruka. Zvakawanda zve vatengi vedu vari kubvunza mibvunzo nezve iyo iPad, futi, zvakadaro, saka yaive nguva yekuchera yakadzika uye kuwana vaviri vebasa.
Ndichingosvika kumba, ndakadownloader Zuva Nezuva, Rupert Murdoch's digital news platform yakagadzirirwa zvakananga iyo iPad (yakaziviswa zuro). Chiitiko ichi chakasarudzika uye chaizvo zvinoshamisa. Semunhu wekare mupepanhau, chinhu chega chandakarasikirwa yaive hwema hwenhau.
Iwo maficha ari hybrid yeese ari maviri nhau, vhidhiyo uye newebhu - uye uzere zvizere zvinowirirana maficha epahwendefa. Mazhinji emifananidzo iri pabhuku anobatana, nemavhidhiyo uye kushambadzira zvakanyatsobatanidzwa. Panzvimbo pekunyanyisa, izvo kushambadzira zvinongova chikamu chechiitiko apo iwe uchitsvedza pakati pezvikamu nemapeji. Ukuru hwezviziviso zvinopeperesa zvese zvipingaidzo zvekushambadzira kwemabhanhire.
Iyo Zuva Nezuva ine kudzika uye mhando yemagazini asi inoendeswa zuva nezuva sepepanhau uye ichigadziriswa mune chaiyo-nguva sewebhu. Nhau huru, mapikicha, vhidhiyo, odhiyo uye magirafu zvinorarama paunonyanya kubata, swipe, pombi uye kuongorora. Chikamu chemitambo chakasarudzika chinokutendera kuti uteedzere mamaki ezvikwata zvaunofarira, mifananidzo uye misoro - kunyangwe ma tweets evatambi.
Zvakawanikwa neZuva nezuva inyaya nyowani, yakasarudzika yenhau. Tiri kusundidzira vazhinji vevatengi vedu kuti vaite zvakanyanya kupfuura kungoita kuita yavo saiti basa pane mobile uye piritsi skrini. Kuti ushandise zvizere zvishandiso izvi zvinoda hunyanzvi hwakawanda… kusanganisa pagination, kutsvaira, vhidhiyo, uye kumwe kudyidzana. Zvinoda mugadziri wewebhu anonyatsonzwisisa chikuva pamwe nemushandisi. (Ehe, tinoziva kuti hatina kuzviita ipapo nebhurogu yedu… tiri kuenderera mberi nekuishandisa pazviri).
Izvi zvakakosha kune vashambadziri uye nekuvhuvhuta miganhu yemasvikiro atakatorera kare. Iyo yakapusa webhu kufona-Ku-Kuita (CTA) kune yekumhara peji kune mazuva ekushandura akaverengerwa. Tichapedza kushivirira kwevashandisi kuburikidza nekudzikira uye hunhu hunotarisirwa. Midziyo iyi inoita kuti kubuditsa zvakasarudzika zviitiko zvisingagumi… isu tinongoda mamwe maturusi ekuti ubate!
Zuva Nezuva rinowanikwa kuburikidza neApple's iTunes kunyorera sevhisi uye kuburikidza neiyo iPad App Store ye $ 0.99 pavhiki kana $ 39.99 pagore. Handina kana kukahadzika ndinenge ndainyorera kana kutongwa kwangu kwapera!
Tags: ipad nhaunhaurupert murdochzuva nezuvanhau dzezuva nezuva
Tsvaga Injini Kugadziridza Hachisi chirongwa
Kukadzi 3, 2011 na8:26 PM
Doug, wakanyora kuti: “Semukomana wekare wepepanhau, chinhu bedzi chandakapotsa kwaiva kunhuwa kwepepanhau. Sezvo Indy Star ichishandisa soya yakavakirwa inki, iyo newsprint yainhuhwirira sekutora chikafu cheChinese?
Kukadzi 8, 2011 na1:38 PM
Semunhu wetekinoroji pachangu ndinogaya nezve zvese zvemagetsi, asi iniwo ndichiri kuda bepanhau rinodhinda rakanaka. Mukuwedzera, kune kunhuhwirira, ini ndaizowedzera rondedzero yeakasiyana maficha kunzwa kwebepa pakati peminwe yako paunenge uchivhura mapeji.
Kukadzi 8, 2011 na9:10 PM
Ida iyo interface, asi iyo journalism inosiya zvakanyanya kudiwa. Tarisa uone mhinduro yeApp Store iyo Daily iri kugamuchira. Ndinofanira kutaura, ndinobvumirana navo.